खुसिको खबर : सिजन शुरू भए पछि आलुको मूल्य घट्दै ! – AB Sansar
खुसिको खबर : सिजन शुरू भए पछि आलुको मूल्य घट्दै !
November 29, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on खुसिको खबर : सिजन शुरू भए पछि आलुको मूल्य घट्दै !
सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ अम्मरसिंह भण्डारीले हाल आलुको मुल्य प्रतिकेजी पैतीस रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको बताए। ब्यबसायीक रुपमा आलु खेती गर्दै आउनु भएका भण्डारीले नयाँ आलु बजारमा नआउदासम्म प्रतिकेजी सत्तरी रुपियाँ पर्ने भएपनि नयाँ आएसंगै आधा मुल्य घटेको बताए । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
कृषि विश्वविद्यालयः ८० प्रतिशत फेल भएपछि विद्यार्थी आन्दोलित
अमेरिकामा पढेर देशकै नाम उज्जवल पार्न चाहान्थे, बा आमा पत्नि र आफन्त सबैलाई रुवाएरै युवा उमेरमा नै बिदा भए !
संक्रमणवाट बच्न भन्दै आफुखुसी यस्तो औसधि खाएपछि अस्पतालमा भरिए यस्ता विरामी
June 14, 2021 Ab-संसार
पत्नी अर्कैसँग ‘पोइल’ गएपछि मलेसियामा उड्यो मिलनको प्राण, शव आउँदा शोक…
January 24, 2021 santosh